Fampidiran-drivotra, famolavolana mafana, fanamafisana ny fitsaboana
Home / Applications / Induction Forging / Fanodinana induction
Sokajy: Induction Forging Tags: manorina, manadino ny fampidirana mafana, fanadinoana induction, induction forging, induction forging equipment, induction forging furnace, milina fanadinoana fanosotra, rafitra fanadinoana, fanorana mony
Fametahana induction sy famoronana mafana Ny teknôlôjia dia fomba iray amin'ny famoahana metaly vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly tokana metaly famokarana entana sy famokarana mafana dia fampiharana fanamafisam-peo mahazatra. Ny famolavolana ny fambolena sy ny fikarakarana haingam-piasa dia midika ho fanodikodinam-bola na famolavolana volavolan-davenona na voninkazo rehefa avy nafanafana tamin'ny hafanana iray izay nanamafisana ny fanoherana ny famoahana. Azo ampiasaina ihany koa ny mason-tsivana tsy misy fangarony. Ny famokarana solotena fanangonana dia napetraka any amin'ny firenena maro, indrindra amin'ny sehatry ny metaly sy ny orinasa. Ohatra avy amin'ny fitaovana azonao ampiasaina amin'ny famolavolana ny famokarana sy ny fanamboarana mafana dia alimo, varahina, varahina, vy sy vy tsy misy tanamaso.
Fanangonam-bidy / fampakaram-bady
fananganana toeram-pambolena mahazatra
Ny fitaovana fanamafisam-peo famonosana dia matetika ampiasaina amin'ny fanamafisana ireo barazy, bar, kitapo varahina, ary blaogy milanja ho an'ny mari-pana mety ho an'ny fananganana sy fafana.
Farany mangataka / fampandrenesana fanoratana
Ny fampangatsiahana induction koa dia ampiasaina mba hizarana ny ampahany toy ny fanondran-tsofina, ny famaranana ny fiara, ny ampahany amin'ny fiara, ary ny fikolokoloana amin'ny fikolokoloana sy ny fanodinana partial.
Ny famolavolana ny famokarana / famokarana fambolena
Raha ampitahaina amin'ny fandroana mahazatra, ny Induction Forging Furnace dia manolotra tombontsoa lehibe sy kalitao tsara:
1. Fotoana fohy miteraka fohy, manamaivanana ny halatra sy ny okontana
2. Toby mora foana ny mari-pana. Ireo singa amin'ny mari-pana any ivelany dia mety ho hita sy esorina
3. Tsy misy fotoana very miandry ny lafaoro mba hahatratra ny mari-pahaizana takiana
4. Ny automatique fanamainana fanamafisana fanamafisana dia mitaky asa vitsy kely
5. Ny hafanana dia azo tendrena amin'ny teboka iray manokana, izay tena manan-danja tokoa ho an'ny ampahany misy faritra tokana.
6. Fahombiazan'ny hafanana lehibe kokoa - Ny hafanana dia vokarina ao amin'ilay ampahany ihany ary tsy mila hafanaina amin'ny efitrano lehibe.
7. Better working conditions. Ny hany hafanana aty amin'ny rivotra dia ny an'ny ampahany ihany. Ny fifandraisana amin'ny asa dia mahafinaritra kokoa noho ny amin'ny fatana solika.